» Akhriso: Dowlada Itoobiya oo War degdeg ah kasoo saartay Guusha FARMAAJO…Badweyntimes.com
Akhriso: Dowlada Itoobiya oo War degdeg ah kasoo saartay Guusha FARMAAJO…
Hailemariam Desalegn, ra’iisul wasaarraha dalka Itoobiya ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliyamudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tartanka madaxweynaha kaga guulleystay Xassan Shiikh Maxamuud oo xilka ka sii degaya, islamarkaana ay si aad ah u taageereysay dowladda Ethiopia.
Hailemariam, ayaa carrabka ku adkeeyay in dowladdiisu ay si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, iyadoo sida uu hadalka u dhiggay ay arrinatani wax badan ka faa’idayaan shacabka labada dal.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa Xasan Shiikh Maxamuud ku amaanay sida uu ugu daallay inay guul ku soo dhamaato doorashada hoggaanka sare ee dalka.
Hailemariam oo la hadlayay wakaaladda wararka Itoobiya ee ENA, ayaa sidookale sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay waddada hormarka ayna ugu dambeyn guulleysan doonto.Waa sida uu isaga sheegaye’.
Dadka fallanqeeya siyaasadda ayaa aaminsan inuu isdhimi karo xiriira dowlladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, maadana uu madaxweynaha cusub yahay mid si weyn u dhaliilsan siyaasadda waddamada deriska oo sida la rumeysan yahay faro-gellin ku haya Soomaaliya.
Si waliba, shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhowweyay mudane Farmaajo,waxyaabaha lagu ammaanana waxaa ka mid ah, inuu danta dalka ka hormariyo midda dalalka deriska.
Si kastatoo ay siyaasadda issu-beddeshaba,waxay xilligan Soomaaliya dhanka dimuquraadiyadda tusaalle u tahay dalal badan oo caalamaka ah,gaar ahaan Afrika,sida, Itoobiya, Sudaan,Jabuuti iyo Eritrea.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo: Culimada Ugu Caansan Somalia oo la ilmeeyay Guusha Farmaajo Shacabkana ka farxiyay…
Warbixinta Xigto »AKHRI: 6 Waxyaabood oo Sababtay Guuldarradii Xasan Sheekh Maxamuud…